Sanbataa fi Dilbata Dabre Kana Godinaalee Oromiyaa Adda Addaa Keessatti Halellaa Raayyaa Ittisaatiin Namoonni Du’uu fi Madaa’uu Dubbatu Jiraattonni
Faayilii - Mormii Oromiyaa, Amboo
Labsiin yeroo muddamaa Itiyoophiyaa keessatti Jimaata dabre raggaasisamuu irraa kan ka’e - Sanbataa fi Dilbata dabre kanas, magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti, qeerroon mormiin karaawwan cufuu isaa fi magaalaalee tokko tokko keessatti, haleellaa raayyaa ittisaatiin namoonni ajjeesamuu, jiraattonni – Raadiyoo Sagalee Ameerikaa, Sagantaa Afaan Amaaraaf ibsanii turan.
Waahelli keenya – Tsiyoon Girmaa, jiraattota haasofiisuun akka gabaastetti, bulchiinsa naannoo Oromiyaa, godinaalee akka Shawaa Lixaa, Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Qellem Wallaggaa fi Horroo-Guduruu Wallaggaa keessatti, humnoonni raayyaa ittisaa jiraattootatti dhukaasuu isaaniitiin, namoonni du’uu fi madaa’uu tu himame.
Shawaa Lixaa, Gudaritti, raayyaan ittisaa karaa cufame akka banan jiraattota dirqisiisuuf jecha mooraa namaatti cabsanii seenuun, abbaa fi ilmoo rasaasaan haleelanii, abbaan achumatti du’uu isaanii fi ilmi isaanii yeroo sanaaf akka hamaatti madaa’ee gara hospitaalaatti ergamuu jraataan akka ollaa isaa ta’an dubbatan tokko waahila keenya Tsiyoon Girmaaf ennaa ibsan, “ganama sa’aa tokko irratti mooraa namaa cabsanii seenan. Abbaa fi mucaa tu mana keessa ture. Abaan hirriba keessaa ka’e. Mucaanis mana sana keessa ture. Seenanii ennaa abbaa rukkutan, mucaan irra dhufnaan mucaas rukkutan. Abbaa har’a awwaalle. Mucaan immoo, gara Hospitaala Ambootti referii godhamee ture. Achitti wal’aanuun waan dadhabameef gara Finfinneetti ergame. Lubbuun mucaa hin dabarre, garuu baay’ee miidhamee jira. Mataa isaa irra rukktamee jira, irree isaa irras, garaa isaa irras rukkutamee jira. Lubbuun isaa ni hafa, jennee hin yaadnu. Garuu, ammaaf lubbuun isaa hin baane” jedhan.
Booda, gaafa Wixataa, Bitootessa 5, gara Gudaritti ennaa bilbillu immoo, mucaan sun du’uu haati isaa VOAtti himanii jiran. Digaafee Dandanaa kan jedhaman – maanguddoon umuriin jaatamii shanii olii kun abbaa ijoollee kudhanii tahuu isaanii fi ijoollee dhiiraa lama qaban keessa tokko ka tahe – mucaan Terrefee jedhamu abbaa koo hin tuqiinaa, jedhee irra goruu isaatiin lameenuu rasaasaan haleelan – jedhan namni ollaa isaanii tahuu dubbatan kun.
Achuma, Shawaa Lixaa, magaalaa Amboo keessattis, Sanbatuma dabre kana walitti-bu’insi akka uumamee, namoonni lama humnoota waraanaan haleelamanii du’uu isaanii – jiraattonni VOA, Sagantaa Afaan Amaaraaf ibsanii turan. Gabaasaa guutuu dhaggeeffadhaa.
Wixataa fi Dilbata Dabre Kana Godinaalee Oromiyaa Adda Addaa Keessatti Halellaa Raayyaa Ittisaatiin Namoonni Du’uu fi Madaa’uu Dubbatu Jiraattonni
Magaalaaleen Oromiyaa Maal Keessa Oolan?
Taanzaaniyaan Godaantota Itiyoophiyaa 84 hidhaa waggaa 3’rratti murteessite